ယောက်ဖဖြစ်သူ Kim Min Joon ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို အားပေးနေတဲ့ G-Dragon | News Bar Myanmar
ယောက်ဖဖြစ်သူ Kim Min Joon ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို အားပေးနေတဲ့ G-Dragon
G-Dragon နဲ့ သူရဲ့အမ Kwon Dami ဟာမကြာသေးမီကပဲထွက်ရှိလာတဲ့ Kim Min Joon ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို support ပေးနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မောင်နှမနှစ်ယောက်က အပြန်အလှန်ပို့ထားတဲ့ messsage ကိုအမဖြစ်သူက Instagram ပေါ်မှာတင်လိုက်တာပါ။
Kim Min Joon ဟာမင်းသမီး Song Ji Hyo နှင့်အတူ Was it love? ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို ရိုက်ကူးနေတာပါ။ G-Dragon နဲ့သူရဲ့အမ Kwon Dami တို့ပြောထားတဲ့ Chat မှာတော့ GD ကသူ့ရဲ့အမကို ယောက်ဖဖြစ်သူ Kim Min Joon ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်နေကြောင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ သက်သေနှင့်တကွ ပို့လိုက်တာပါ။
ဒါကိုအမဖြစ်သူက သူရဲ့ IG acc မှာပရိတ်သတ်တွေကို သိစေဖို့ တင်လိုက်တာပါ။ ဇနီးဖြစ်သူ Kwon Dami ကလည်း သူ့ယောကျာ်းရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကြဖို့ အခြားသူတွေကို လိုက်ပြီးတိုက်တွန်းနေတာလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
မကြာသေးမီကလည်း ယောက်ဖဖြစ်သူမင်းသားက G-Dragonလို superstar တစ်ယောက်ကို ယောက်ဖတော်ထားရတာ နည်းနည်းတော့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်မိကြောင်း ဝန်ခံထားပါသေးတယ်။ ယောက်ဖလေးက အရမ်းအောင်မြင်တဲ့ Idol တစ်ယောက်ဆိုတော့ တခါတလေဘယ်လို ပြောရ၊ဆိုရမှန်းမသိကြောင်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုလိုမိသားစုတွေ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် support ပေးကြတာကိုမြင်ရတော့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ Kim Min Joon ကိုအရမ်းအားကျနေကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ GDလိုလူဆီက အားပေးတာကိုခံရလို့ပါ။
Was it love? ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ မင်းသမီး Song Ji Hyo နှင့်မင်းသား ၄ဦးပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Drama တစ်ခုပါ။ အပတ်စဉ် Wed/Thurs မှာထုတ်လွှင့်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ GD suport ပေးထားတဲ့ Was it Love? ဇာတ်လမ်းတွဲကို ပရိတ်သတ်ကြီးရော ကြည့်ပြီးပြီလား။ အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ ဆွေးနွေးခဲ့လို့ရတယ်နော်။
Next ဟာသရုပ်ရှင်တစ်ခုအတွက် ကမ်းလှမ်းခံထားရတဲ့ Gong Myung နဲ့ Lee Yi Kyung »
Previous « Han Seo Hee တစ်ယောက်ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့ကာလအတွင်းမှာပင် ထပ်မံပြစ်မှုကျူးလွန်